Sabti, May 12, 2012 - Caasimadda 2aad ee dalka Finland oo maanta lagu qabtay bandhigyo & dabaaldegyo ku saabsan 40guuradii Afka-Soomaaliga & 69guuradii ururkii SYL.
Waxaa maanta lagu qabtay magaalada Turku ee caasimadda 2aad ee dalka Finland horayna u aheyd caasimaddii hore ee dalkaas xusas loo sameeyay 40guuradii qoraalkii Afka-Soomaaliga & aasaaskii 69guuradii ururkii dhallinyarada Soomaaliyeed ee Somali Youth League.
Maktabadda Turku waxay hoodo & ayaan u yeelatay in qabto carwo buugeed sanadkii 2aad, iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay in ka badan 250 nooc ama muunadood oo kal duwan.
Madaxda & shaqalaha maktabadda Turku oo maktabadda ugu weyn ee magaalada Turku oo beri ahaan jiray caasimadda dalkan Finland intii aanan loo wareejinin caasimadda waqtigan ee Helsinki ayaa dadaal ugu jira sidii ay u horrumarin laheyd keydka dhinacyada Taariikhda, Dhaqanka & Suugaanta Soomaalida eek u halkaasi.
Kulankan oo ay sanadkan ka soo qeybgaleen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Turku, iyadoo halkaasi ay ammaan & mahadcelin ballaaran halkaasi uga soo jeediyeen Qoreyaasha Soomaalida ee ka kala yimid Waqooyiga America & Ingiriiska & Sweden ee sanadkan ka qeybgalay kulankaasi.
Dhinaca kale waxaa iyagana halkaasi hadallo ka soo jeediyay Max�ed Sheikh Xassan & C/casiis Cali Ibrahim "Xildhiban" oo iyaguna halkaasi ka hadlayay ayaa dhinacoodu ku ammaanay jaaliyadda Soomaalida ee goobjoogga ka ahaa kulankaasi dadaalka, daryeelka & horrumarinta afkeena hooyo, kaasi oo sanadani si gaar ah ugu soo beegmay sanadguuradii 40aad ka dib markii la qoray farteena ama afkeena hooyo.
Guntii & gebagabadii waxaa isna halkaasi hadallo ka soo jeediyay C/qaadir Abshir Kadiye oo ka tirsan macallimiinta Soomaalida ee dalka Finland isla markaana ah garwadeenii barnaamijkan suurtagaliyay halkaasina hambalyo uga soo jeediyay dhammaan qoreyaasha Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan shirkadda Scansom publishers, dadaalkii ay u galeen keydinta & qoraalka afka Soomaaliga.
Munaasabaddan waxaa suurtagalisay Susanna Kolehmainen oo ah agaasimaha & xiriiriyaha Dhaqamada kala duwan ee bulshooyinka ku nool dalka Finland, gaar ahaan Turku Library.